वित्तीय साक्षरता Archives ~ Page5of 25 ~ Banking Khabar
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका तीन फाइदाहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने विभिन्न ५ उपकरणमध्ये एक हो वैदेशिक रोजगार बचतपत्र । यद्यपि, हालसम्म तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा अप्रभावकारी भएको उपकरण वैदेशिक रोजगार बचतपत्र नै हो । बचतपत्र किन्दाका फाइदाहरु सरकारले यस्तो बचतपत्र किन्नेलाई ९ प्रतिशत …
बैंकबाट ऋण निकाल्न के गर्ने ? (यस्तो छ बैंकिङ कर्जाको प्रावधान)
बैंकिङ खबर / भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरि लिइएको रकम कर्जा वा ऋण हो । सामान्यतयाः ऋण प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गर्दछ भने कर्जामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभुती पनि पर्ने गर्दछ । बैंकहरुले संकलित निक्षेप तथा पुँजी बिभिन्न क्षेत्रमा अल्पकालिन, …
बचत गरेरै हो धनी हुने (हेर्नुस् पैसा बचत गर्ने तरीका)
बैंकिङ खबर / खर्च गर्दा पूर्वयोजना बनाएर बजेट तय गरी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरता भन्नु पैसाले कसरी, कति र के काम गर्छ भनी बुझ्न सक्ने हुनु हो । वित्तीय साक्षरताको अभावमा व्यक्तिले परिवार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोर निर्णय …
कुन कुन कामका लागि दिन्छन् बैंकले कर्जा ? (बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने १० ‘टपिक’हरु)
बैंकिङ खबर ​ / भविष्यमा भुक्तान गर्ने गरि लिइएको रकम कर्जा वा ऋण हो । सामान्यतयाः ऋण प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने गर्दछ भने कर्जामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्याभुती पनि पर्ने गर्दछ । बैंकहरुले संकलित निक्षेप तथा पुँजी बिभिन्न क्षेत्रमा अल्पकालिन, …
बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई बैंकिङ कसुर
बैंकिङ खबर / व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि बैंकबाट कर्जा लिएर उक्त कर्जाको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत कार्बाही हुन्छ । आफूले जे उद्देश्यका लागि कर्जा लिइएको हो, सोही क्षेत्रमा कर्जा परिचालन नगरी फरक ठाउँमा लगानी गरेमा त्यसलाई कर्जा दुरुपयोग भएको …
‘ट्रेजरी’ बिल के हो ? किन जारी गरिन्छ ?
बैंकिङ खबर / ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिल २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ अवधिको निष्कासन गर्ने गरिएको छ । …
वित्तीय साक्षरतामा स्वीडेन र डेनमार्क सर्वोत्कृष्ट
विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा, वित्तीय साक्षरताको अवस्था १३ देखि ७१ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या वित्तीय रुपमा साक्षर रहेको मुलुक यमन हो । यहाँका १३ प्रतिशत जनता मात्रै वित्तीय रुपमा साक्षर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, …
बैंकमा सीईओ बन्न कस्ता योग्यता चाहिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको योग्यता तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन ९बाफिया० को दफा १६ मा बाणिज्य बैंकहरुका संचालक र दफा १७ मा स्वतन्त्र संचालकको योग्यता तोकिने ब्यवस्था छ । यस्तै सोही ऐनको …
नयाँ नेपाली नोट छाप्न कति लाग्छ खर्च ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५२ अनुसार नोट निष्काशन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । यसैको उपदफा ९४० अनुसार बैंकले आवश्यकताअनुसार विभिन्न दरका नोट निष्काशन गर्न सक्छ । नोट निष्काशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र …
लघुउद्यम क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या र समाधानहरु
ध्रुवराज पौडेल – नेपालमा साना तथा लघुउद्यम (Small and Micro Enterprise, SME) व्यवसायको इतिहास धेरै पूरानो छैन । यस व्यवसायको विकासका लागि वि.सं. १९९६ मा नेपाली कपडा र घरेलु ईलम प्रचार अड्डाको रुपमा सुरु भई वि.सं. २०३० सालमा घरेलु तथा …